एड्स बोकेर अरुलाई बाँच्न सिकाउँदै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / एड्स बोकेर अरुलाई बाँच्न सिकाउँदै
एड्स बोकेर अरुलाई बाँच्न सिकाउँदै
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड March 13, 2018	0 85 Views
घो राही  । कहिले काहीं नियति यति कठो र बनिदिन्छ कि बिनागल्ती पनि जीवनभर सजाय बे हो र्नुपर्छ । बुबा–आमाको को खबाट जन्मजात एड्स संक्रमित भएर जन्मिएकी २१ वर्षीया उनी (नाम नखुलाइएको ) यस्तै पात्र हुन् । एड्सका बारे मा ढिलो मात्रै बुझे की उनलाई शुरूवाती दिनमा त निकै पीडा भयो । तर बुझ्दै गएपछि उनलाई भने सामान्य रहे छ भन्ने लाग्यो । र, त आजभो लि सोही कुरा बुझाउदै हिडे की छन् र आफूजस्तै संक्रमित महिलाहरुलाई एड्स भएर पनि बाच्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणीय र पथदर्शक बने की छन् । ‘एड्स हुदै मा जीवन सबै सकियो भन्ने हुदै न । बरु यसले जीवनमा अगाडि बढ्न थप ऊर्जा दिन्छ’– उनले यसरी बुझे की छन् ।
घो राहीस् िथत एनडिसी संस् थामार्फत विगत छ महिनादे खि मो बिलाइजरको भूमिकामा खटिएकी उनी अहिले आफै पीडामा परे र पनि अर्कालाई प्रे रणा जगाउने काम गरिरहे की छन् । तर समाजमा भने एड्स संक्रमितहरुलाई गरिने छिछी र दूरदूरको व्यवहारले आफू खुल्न नसके को उनको दुखे सो छ । ‘एड्स संक्रमितहरुका बारे मा मानिसहरुको साघुरो सो चका कारण अहिले खुल्न नचाहे की उनले भने कुनै दिन समाजलाई उदाहरणीय बने र दे खाउने संकल्प छ । युगबो धस“गको सम्वादमा आफ्नो नाम र ठे गाना नखुलाउने शर्तमा उनले आफ्नो व्यथा फुकाइन् ।
‘बुवा कामको सिलसिलामा भारतको मुम्बईमा जानुभएको थियो रे  । उतै पाच छ, वर्ष बसे र घर फर्किनुभएछ’– उनले भनिन्– ‘सायद त्यसै बे ला हो ला उहा“ एड्स संक्रमित भएर आउनुभएको र मम्मीलाई पनि त्यसै री नै सरे को हुनसक्छ । बुवा आएपछि मात्रै म जन्मिएकी हु ।’ उनी भन्दा अगाडि चार वर्षले फरक एउटी दिदी थिइन् ।
आफूलाई एचआईभी/एड्स भएको बारे बाबुले कसै लाई नभन्दा परिवार कसै लाई जानकारी भएनछ । ‘के ही समयपछि बुवा अत्यन्त कमजो र हुनुभयो र संसार छाड्नुभयो ’– उनले भनिन्– ‘त्यसको वर्षदिन नबित्दै आमा पनि बित्नुभयो  ।’ तर के कारणले हो भन्ने परिवारलाई धे रै सम्म पनि जानकारी भएन ।
सानो मा एकपटक उनी बिरामी हदा काठमाडांै पुग्दा उनलाई एचआईभी पो जे टिभ दे खिएको भन्ने सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो रे , त्यसै बे ला वडासचिवले त्यो समाचार हे रे का रहे छन् ।
उनी भर्खरै नौ वर्षमा टे के की थिइन् त्यसै बे ला गाविस सचिवले एड्स हुनसक्ने भन्दै उनलाई रगत जाच गराउन भने छन् । अनि दिदीसगै घो राहीको परिवार नियो जन संघमा आइन् र रगत जचाइन् । ‘दिदीमा एचआईभी ने गे टिभ दे खायो , मलाई पो जे टिभ’–उनले भनिन्– ‘म त बच्चा नै थिए, एचआईभी के हो ? के हुन्छ ? के ही थाहा थिएन ।’ के भएर भएको हो ला भने र समे त उनको कलिलो दिमागले के ही सो च्न सके न ।
गाउमा त्यसपछि एक कान दुई कान हदै हल्ला फै लिदै गएछ । ‘एक पटक त आफ्नै साथीबाट सुने – ‘फलानीलाई त बुवा–आमाबाट मर्ने रो ग लागे को छ रे , त्यसको नजिक जान हुन्न’– उनले भनिन्– ‘साथीहरुबाटै त्यस्तो सुन्दा साच्चै मलाई ठूलै मर्ने रो ग नै लागे जस्तो लाग्यो  ।’
आफूलाई लागे को रो गका बारे मा परिवार नियो जन संघमा सामान्य परामर्श पाए पनि उनले धे रै बुझे की थिइनन् । न त उनको घर, परिवार र गाउमा यसबारे धे रै लाई जानकारी थियो  ।
सानो मा त के ही लागे न । तर जब हुर्किदै गइन् र आफूलाई लागे को रो ग कहिल्यै निको नहुने भन्ने बारे थाहा पाउदै गइन । मनमा भय छायो  । चारै तिर अन्धकार छाउन थाल्यो  । टे के को जमिन पनि भासिदै गयो  ।
‘बुवाकै कारणले आमा र आफू संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि पनि मृत्यु भइसक्नुभएका बुवाप्रति घृणा पनि जागे र आँउ“थ्यो ’– उनले भनिन्– ‘तर अहिले आफै बुझ्ने भएपछि भने लाग्छ– उहा“बाट पनि अञ्जानमै गल्ती भएको हो ला ।’
पछि जब उनी हुर्किदै गईन् र तिनै वडासचिवको सहयो गले दाङ प्लसमा आइपुगिन् । ‘त्यहा म जस्तै एड्स बो के र बाचे का थुप्रै लाई दे खें  । त्यहींबाटै उपचारका लागि काडामाडांै पनि पुगे ं’– उनले भनिन्– ‘अनि पो लाग्यो , म जस्ता त थुप्रै रहे छन् । यो रो ग लागे र मात्रै जिन्दगी नसकिदो रहे छ । सहयो ग र माया पाए लामो समय बाच्न सकिने रहे छ ।’
त्यसपछि उनी उपचारका लागि अरु थप के ही पटक काठमाडौ ं र ने पालगञ्ज पुगिन् । अनि विस्तारै उनमा ऊर्जा थपिन थाल्यो  । आफूमात्रै हो इन बिनागल्ती श्रीमान्बाट एचआईभी संक्रमित भएर सजाय भो ग्नुपरे का थुप्रै दिदिबहिनी भे टिन्, उनीहरु आफ्ना मनमा लागे का पीरव्यथा सुनाउथे  । उनी पनि आफ्ना मनका कुरा पो ख्थिन् । ‘समाजमा खुल्न नसके र लुके र बस्नु पर्दा जिउदो लाश जस्तै लाग्ने भए पनि उहाहरुसगै मनका कुरा पो ख्न पाउदा मनमा कुनै खुशीको कुनै सिमा रहे नन् ।’– उनले मुहार उज्यालो पारिन् ।
त्यसपछि बे ला–बे लामा दाङ प्लस र अरु यस् तै के ही संघसंस् थाहरुको सहयो गमा विभिन्न तालिम र गो ष्ठीमा पुग्थिन् । अनि बुझदै गइन् एचआईभी संक्रमण हुने बित्तिकै जीवन रित्तिदै न, बरु उनीहरुले माया साथ सहयो ग र हौ सला पाउने हो भने लामो जीवन बाच्न सक्छन् ।
अहिले पनि समाजमा एचआईभीलाई हे रिने दृष्टिको ण साघुरो रहे को उनको गुनासो छ । ‘झ्न त्यो बे लाको समय कस्तो हो ला ? साथी भाइसगै खुल्न नसक्ने  । कतै थाहा पाए भने के गर्लान् भन्ने मनमा ठूलो भय हुन्थ्यो ’– उनले भनिन्– ‘तर पनि पढाइको महत्व बुझे की थिए । त्यसै ले पनि पढाइलाई छो डिन ।’ आहिले उनी विविए दोस्रो वर्षमा अध्ययरत छिन् । भो लि जीवनमा के ही गर्ने भन्ने ठ्क्याक्कै यो जना नबनाई हाले पनि आउदा दिनमा समाजकै लागि के ही उदाहरणीय बन्छु भन्ने उनको मनमा सो च छ ।
उनले पढाइलाई एकातिर अगाडि बढाएकी त छिन् नै अर्काे तर्फ एनडीसी संस्थामार्फत मोबिलाइजरका रुपमा खटिएकी छन् । ‘माया, सद्भाव, प्रे रणा पाउने हो भने जीवन लम्ब्याउन सकिन्छ । एचआईभी लागे को मानिस आम मानिससरह पूर्ण आयु बाच्न सक्छन्’– उनले भनिन्– ‘वास्तवमा एचआईभी संक्रमितको आयु आत्मविश्वास नै हो  ।’
एचआईभी संक्रमितलाई सामाजिक लान्छना, विभे दले मात्रै मार्दाे रहे छ, एड्सको आयु हुदो रहे नछ भन्ने उनले बुझिसके की छन् । र, त आज आफूजस्तै संक्रमित महिलाहरुलाई त्यही कुरा बुझाउदै हिड्ने गरे की छन् । आफूले चिने जाने का को ही संक्रमित छन् भने पनि संस्थासम्म पु¥याइदिन्छिन् ।
अन्तिममा जादाजादै उनले दुखे सो पो खिन्– ‘तर अहिले पनि मानिसहरुमा संक्रमितहरुलाई हे र्ने सो च र दृष्टिको ण बदलिन सके को छै न । अरुको के कुरा गर्नु ? हाम्रै समाजभित्रका डाक्टर, बृद्धिजीबीहरुबाटै भे दभाव र तिरस् कार सहनुपर्छ ।’
Previous: बाँध नजिकबाट ढुंगा निकाल्दा समस्या
Next: राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा तिमिल्सिना निर्विरो ध